Ceel Riig ah Oo Laga Hirgaliyay Tuulada Qabri-nuune. - Cakaara News
Ceel Riig ah Oo Laga Hirgaliyay Tuulada Qabri-nuune.
Awbare(CN) Arbaca, 3da February, 2016, Waxaa laga hirgaliyay tuulada qabri-nuune ee degmada Awbare ee Gobolka Faafan ceel biyood riig ah oo ah kuwa biyaha dhulka hoostooda laga soo jiido.
Waxaana hirgaligantiisa ceelkan riiga ah fulisay hay’ada Don-Gianmaria memorial development association oo kaashanaysa maamulka degmada Awbare. ceelkan oo tijaabo ku jiray maalmahan ayaa waxaa booqday maanta masuuliyiinta degmada Awbare oo uu horkacayo gudoomiyaha degmada Awbare iyo masuuliyiinta hay’ada.
Haddaba waxaa ugu horayntii kula hadlay warbaahinta deegaanka ceel kaasi dushiisa gudoomiyaha degmada awbare mudane Maxamed Cabdi Faarax oo ka warbixiyay ahmiyada uu bulshada u leeyahay ceelkani sidoo kalena sheegay in ay xukuumada DDSI dadaal balaadhan ugu jirto sidii shacabka deegaanku meelkasta oo ay joogaan uga heli lahaayeen biyo nadiif ah islamarkaana cidkasta oo gacan ka gaysata dadaaladaasi ay soo dhawaynayso xukuumadu. Wuxuuna gudoomiyuhu si gaar ah ugu mahad celiyay hay’adan DGMDA oo ah hay’ad wadani ah oo ka qayb qaatada hawlaha horumarka.
Waxaa kale oo ka mid ahaa masuuliyiintii ka hadashay ahmiyada uu ceelkani leeyahay madaxa arimaha xisbiga ee degmada Awbare mudane Xikam Axmed Khaliif iyo maxada xafiiska biyaha ee degmada awbare mudane Cabdixakiin Nuur Ahmed kuwaasi oo sheegay in ceelkani qayb ka yahay waxqabadka qorshayaasha dhinaca biyaha kuna booriyya shacabka in ay si habsamiya uga faa.iidaystaan.
Maareeyaha hay’ada DGMDA mudane Fu’aad Ala Mire ayaa ka warbixiyay waxqabadka iyo jihooyinka horumarineed ee hay’adan waxaana ka mid ahaa hadaladiisa” hay'addu iyadoo ka duuleysa jihada horumarineed iyo dadaalka dawlada deegaanka soomaalida Itoobiya ay ugu jirto xaqiijinta horumar waara iyo cidhibtirka saboolnimada ee lagu tallaabsaday shantii sano ee ugu dambeysay islamarkaana laga gaadhay guulo wax ku ool ah waxwayna lagaga badalay nolosha shacabkeenna xoolo dhaqato iyo kuwa xoolo dhaqato beeraleyda ah, ayaa waxaa sidoo kale ay hay’adani dadaal ugu jirtaa dhankeeda ka qayb-qaadashada dadaaladaasi gaar ahaan dhinaca mashaariicda horumarineed ee kala duwan sida. biyaha, waxbarashada iyo caafimaadka kana hirgalisay meelo ka mid ah gobolka Faafan gaar ahaan degmada Aw-barre Sidoo kale maanta waxay hay'addu ka qodday qabalaha Qabri-nuno ee ka tirsan degmada awbare ceel kan riig ah oo dhererkiisu yahay 213mitir isla markaana halkii ilbidhiqsiba soo saaraya 6.8 litir.
Xiliga ay masuuliyiintani booqdeen ceelka ayaa waxa ka faa’iidaysanayay bulsho aad u tiro badan oo ka helay biyo nadiif ah taasi oo ay dadka iyo duunyaduba kaga raysteen biyaha ay markii hore masaafo fog u doonan jireen maadaamo oo lagu jiro xili uuna roob ka di-in deegaanka waxayna siwayn u soo dhaweeyay ceelkani riiga ah ee ay ka heleen biyaha nadiifta ah una mahad celiyay xukuumada DDS iyo hayadaniba hirgalisay.